iSH: chirongwa chekumhanyisa iyo Linux shell nharaunda pane ako iOS zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
iSH chirongwa chitsva mandinoziva inotarisira kutora Shell Linux nharaunda inomhanya munharaunda pane chishandiso cheIOS, uchishandisa x86 emulator mune mushandisi modhi. Iyo purojekiti ichiri mukuvandudzwa zvinoenderana nezvakasiyana zvinyorwa zvevanyori vayo, asi iwe unogona kutomboyedza nekuda kweTestFlight, application yaApple iyo inobvumidza vashandisi kuyedza beta vhezheni dzemashandisirwo ekuvandudza.
Mugumo chinangwa by ISH ndeyekupa iyo terminal iyo iwe yaunogona kushandisa kuisa yekuraira mitsara uye unomhanya navo senge pane Unix system.
ISH Haisi yekutanga app paApp Store kupa zvakadai zvinhu, asi yekutanga yakavakirwa pane yakazara Linux kugovera.
1 Nezve iSH
1.1 Tora iSH
Yehunhu hunobuda pachena yeSH ndeyekuti izvi zvinoenderana neAlpine Linux kugovera, iyo yakagadzirirwa kusangana, yakachengeteka uye nyore kushandisa. Kunyanya chaizvo, Alpine Linux idiki diki yekuparadzira iyo isingape chero graphical interface uye ine mukana wekuve wakanyanya kujeka.
Kugoverwa kweLinux kunozivikanwa nekushandiswa zvakanyanya munyika yeserver kana kumagetsi masisitimu emidziyo seDocker. Zvichienzaniswa nezvimwe zviteshi zvakambopihwa paApp Store, iSH haipe ese ekuraira tambo maturusi.
ISH zvakaita sekuparadzaniswa kwakazara kweLinux. Saka nekudaro, eIzvi zvinokutendera iwe kuti uise ekuwedzera maturusi, kana zvichidikanwa, uchishandisa iyo Alpine package maneja "apk", izvo zvinoita kuti zvive nyore kumushandisi kuisa maturusi avanoda. Nekudaro, iko kugovera kunosanganisirwa neseti shoma yezvishandiso, saka mushandisi anofanira kuvimba nemaneja wepakeji kuti awane zvimwe zvekushandisa.
iSH inoshandisa yakazara folda yekuvakisa, umo mafaera anogona kuwanikwa kuburikidza ne "Mafaira" application. Kunyangwe zve izvi zvataurwa kuti "Mafaira" anofanira kunge akawedzerwa senzvimbo mune iyo faira maneja.
Ichi chichaita inobvumira mushandisi kuwana mafaera ese kugovera pane yako kifaa. Mune iyo faira remuti, nzvimbo yemushandisi iri mukati meiyo default nzvimbo mu / mudzi dhairekitori, mafaira ekumisikidza mu / nezvimwe, zvinogoneka mu / bin, nezvimwe.
Saka nekudaro chirongwa ichi chichiri chitsva uye inoshanda ne emulator, saka zvakakosha kuti uzive kuti haasi ese maLinux zvirongwa aripo uye mamwe achiri mukuvandudza, senge SSH.
Zvisinei, iSH inouya nemamwe mapurogiramu akajairwa izvo zvaizotarisirwa munzvimbo yeLinux.
Pamapurogiramu akasanganisirwa atinogona kuwana: semuenzaniso, Vi, wget, zvishandiso zvekumanikidza uye kudzvanya mafaira . Iwe unogona zvakare kurodha pasi chinhu ne "curl" kana "wget" uye wozvitumira kune chimwe chishandiso pane chishandiso.
iSH inoremekedza hunhu hwese hwekushandisa kweIOS. iSH inoenderana nebhokisi rejecha uye inoremekedza mamiriro ekuburitswa muApp Store.
Zvisinei, vamwe vanotenda kuti iSH inogona kubviswa kubva kuApp Store munguva pfupi iri kutevera. Ivo vanotaura, semuenzaniso, OpenTerm, iyo yakabviswa kubva kuApp Store mushure mekunge Apple yahaya mugadziri wayo.
Pakupedzisira kune avo vanofarira kugona kuisa iSH pane chishandiso cheIOS, pIvo vanofanirwa kutanga vaisa iyo TestFlight application, iyo inokutendera iwe kuti uise beta zvirongwa.
Kamwe TestFlight yaiswa, unofanirwa kuenda kunotevera chinongedzo uye pano unofanira tevedzera rairo dzakapihwa.
Vanozobvunzwa kuti vatambire kukokwa kwekujoinha beta vhezheni yeSH. Kana iSH yaiswa iwe unogona kuivhura senge chero imwe iOS app uye unozokwaziswa neShell Ash kwaunogona kutanga kumhanya mirairo nekuisa mamwe mapakeji uchishandisa iyo apk package maneja.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza rumwe ruzivo mune subreddit yekushandisa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » iSH: chirongwa chekumhanyisa Linux shell nharaunda pane ako maIOS